ကိုဗစ်ရောဂါပိုးကူးဆက်ခံရပြီး အရေးပေါ်အောက်စီဂျင်လိုအပ်နေတဲ့ အစီအစဉ် တင်ဆက်သူ ကောင်းထက်ဇော် (ကိုကောင်းကြီး) – Maythadin
ကိုဗစ်ရောဂါပိုးကူးဆက်ခံရပြီး အရေးပေါ်အောက်စီဂျင်လိုအပ်နေတဲ့ အစီအစဉ် တင်ဆက်သူ ကောင်းထက်ဇော် (ကိုကောင်းကြီး)
အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ သူကတော့ အစီစဉ်တင်ဆက်သူ ကောင်းထက်ဇော်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ကောင်းထက်ဇော်ဟာဆိုရင် မိသားစုပြိုင်ပွဲ၊ The Money Drop Myanmar (ငွေတွေဝင်)အစီအစဉ်ရဲ့ ပင်တိုင် အစီစဉ်တင်ဆက်သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာကိုဗစ် ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူတွေမှာစိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေကြရပြီးတစ်နေ့တစ်ခြား ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့် သေဆုံးသူတွေလည်း များပြားနေတာ ဖြစ်ပါတယ်.
လူတန်းစားမရွေး ရောဂါကူးစက်ခံစားနေကြရတဲ့ အခုလိုအချိန်မှာ ကောင်းထက်ဇော်က ကိုဗစ် 19 ရောဂါကပ်ဆိုးကြီးကူးဆက်မှုကိုခံနေရပြီး အောက်စီဂျင်အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့အတွက် ကောင်းထက်ဇော်ရဲ့အစ်မက အခုလိုပဲ အကူအညီတောင်းလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
အဲ့ဒါကတော့”ကျွန်မမောင်လေး ကောင်းထက်ဇော်အတွက် အရေးတကြီး Oxygen လိုနေပါတယ်။လှူတာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ရောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အသိမိတ်ဆွေလေးများရှိရင်
ပြောပေးကြပါလက်လှမ်းမီသလောက်လေးကူညီပေးကြပါ Share ပြီးကူညီပေးကြပါရန်နှင့် ရရှိခဲ့ရင်လည်း 09762711950 လေးကိုဆက်သွယ်ပေးကြပါ “ လို အမဖြစ်သူက ပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်။
ကိုကောင်းကြီးတစ်ယောက် ကိုဗစ်ရာဂါကပ်ဆိုးကြီးကို အမြန်ဆုံးအံတုကျော်လွှားနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်း ခုနှစ်ရက်သားသမီးအားလုံးလည်း ဒီရောဂါကပ်ဆိုးကြီးမှအမြန်ဆူံလွတ်မြောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိတယ်။
Credit ; Celebtiry Platforms
အျပည့္အဝရရွိထားတဲ့ သူကေတာ့ အစီစဥ္တင္ဆက္သူ ေကာင္းထက္ေဇာ္ပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ေကာင္းထက္ေဇာ္ဟာဆိုရင္ မိသားစုၿပိဳင္ပြဲ၊ The Money Drop Myanmar (ေငြေတြဝင္)အစီအစဥ္ရဲ႕ ပင္တိုင္ အစီစဥ္တင္ဆက္သူတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာျပည္မွာကိုဗစ္ ေရာဂါနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူေတြမွာစိုးရိမ္ေၾကာက္လန႔္ေနၾကရၿပီးတစ္ေန႕တစ္ျခား ကူးစက္ျဖစ္ပြားမႈေတြေၾကာင့္ ေသဆုံးသူေတြလည္း မ်ားျပားေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.
လူတန္းစားမေ႐ြး ေရာဂါကူးစက္ခံစားေနၾကရတဲ့ အခုလိုအခ်ိန္မွာ ေကာင္းထက္ေဇာ္က ကိုဗစ္ 19 ေရာဂါကပ္ဆိုးႀကီးကူးဆက္မႈကိုခံေနရၿပီး ေအာက္စီဂ်င္အေရးေပၚလိုအပ္ေနတဲ့အတြက္ ေကာင္းထက္ေဇာ္ရဲ႕အစ္မက အခုလိုပဲ အကူအညီေတာင္းလာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။
အဲ့ဒါကေတာ့”ကြၽန္မေမာင္ေလး ေကာင္းထက္ေဇာ္အတြက္ အေရးတႀကီး Oxygen လိုေနပါတယ္။လႉတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ေရာင္းတာပဲျဖစ္ျဖစ္အသိမိတ္ေဆြေလးမ်ားရွိရင္
ေျပာေပးၾကပါလက္လွမ္းမီသေလာက္ေလးကူညီေပးၾကပါ Share ၿပီးကူညီေပးၾကပါရန္ႏွင့္ ရရွိခဲ့ရင္လည္း 09762711950 ေလးကိုဆက္သြယ္ေပးၾကပါ “ လို အမျဖစ္သူက ေျပာၾကားလာခဲ့ပါတယ္။
ကိုေကာင္းႀကီးတစ္ေယာက္ ကိုဗစ္ရာဂါကပ္ဆိုးႀကီးကို အျမန္ဆုံးအံတုေက်ာ္လႊားနိုင္ပါေစလို႔ဆုေတာင္းရင္း ခုႏွစ္ရက္သားသမီးအားလုံးလည္း ဒီေရာဂါကပ္ဆိုးႀကီးမွအျမန္ဆူံလြတ္ေျမာက္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။ ဖတ္ရႈေပးတဲ့ ပရိတ္သတ္ႀကီးကိုအထူးပဲေက်းဇူးတင္ရွိတယ္။
Source ; စြယ္စုံသတင္းစုံ
သူမအရမ်းချစ်ရတဲ့ ချစ်သူလေးရဲ့မွေးနေ့မှာ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ လက်ဆောင်လေးတစ်ခုပေးလိုက်တဲ့ မအေးသောင်း
ရေမွန် ကွယ်လွန်ခြင်း ၃လပြည့်အတွက် Eternal Gosh ဖန်တီးထားတဲ့ “ ကြယ်တံခွန် ” သီချင်း Music Video
ဦးမေတ္တာ ၊ မကြူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး လျစ်လျှူရှုခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကို ဦးဆင်မဒဲ့ဆော်ပြီ